Philips HP8310 Slim Plate Straightener | Buy online | SHOP.COM.MM
Philips HP8310 Slim Plate Straightener
ဆံပင်ဖြောင့်ချင်ပြီး ဆံပင်ပျက်စီးမှာကြောက်ကြတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ် Philips တံဆိပ်က။ Read more Hide
Philips ဆံပင်ဖြောင့်စက်လေးက အပူလွန်ကဲခြင်းတွေမဖြစ်စေလို့ ဆံသားပျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်ပေးတာကြောင့် အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
ဆံသားအတို အရှည်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပြီး အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ ဆံပင်ဖြောင့်စက်လေးပါ။ ခုဆို ဆိုင်သွားနေစရာမလိုဘဲ အိမ်မှာတင် လိုချင်တဲ့ပုံသွင်းနိုင်လို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
It gives 210C which is ideal high heat for professional hairstylists to obtain perfect, salon straight results.
This feature has been designed to provide peace of mind. If left on, the appliance will automatically switch off after 60 min.
Specifications of HP8310 Slim Plate Straightener